Warmurtiyeedkii shirkii London ee Somalida loo qabtay. | Awdalpress.com	Qoraalo | Tacliiq Raaci | E-mail / Home
Warmurtiyeedkii shirkii London ee Somalida loo qabtay.
Both comments and pings are currently closed.	Hordhac
Argagaxisada 18. Argagaxisanimadu waxaa ay halis adag ku tahay ammaanka Soomaaliya, kan gobolka, iyo kan caalamka. Waxaa ay silic weyn u geysatey dadka Soomaaliyeed. Waxaan isla wada oggolaaney in aan u wada shaqeyno si sidii hore ka xooggan, iyo iyada oo si buuxda loo ixtiraamayo talinta sharciga, xuuqaha aadanaha, iyo sharciga caalamiga ah ee bani’aadamnimada, in la dhiso kartida si loo carqaladeeyo argagaxisada gobolka, iyo in wax laga qabto sababaha asalka u ah argagaxisanimada. Waxaana aan aan isla garanney muhiimadda ay arrintan leedahay. Waxaan isla garanney muhiimadda ay leedahay carqaladeynta safarrada argagaxisada ay ku tagayaan Soomaaliya iyo kan ay kaga imanayaan, iyo muhiimadda ay leedahay carqaladeynta maaliyadda argagaxisada, waxaana aan ugu baaqney dalalka goboka ku yaalla in ay hirgeliyaan talooyinkii Koox-halweedda Tallaabada Maaliyadda/Financial Action Task Force ee ku saabsanaa la dagaallanka dhaqidda lacagta (raad-gadidda lacagta/money laundering) iyo maaliyad-siinta argagaxisada. Waxaan xusney in sir-doon iyo baaritaan taabogal ah, iyo taageero la siiyo nidaamka cadaaladda dembiyada ee Soomaaliya, ay muhiim u yihiin la dagaallanka argagaxisada. Waxaan ku heshiinney in aan la shaqeyno Golaha Caalamiga ah ee La-dagaallanka Argagaxisada/the Global Counter Terrorism Forum iyo hay’adaha kale ee caalamiga ah iyo kuwa goboleed si looga soo dhalaalo hawshan muhiimka ah.
21. Waxaan ku heshiinney in guud ahaan taageerada arrimaha degannaanshaha ee gudaha loo bixiyo si waafaqsan Heshiiska Cusub ee ka hawlgelidda qaramada jilicsan ee dhowaan lagu ansxiyey Busan, oo aan ka faa’iideysanno istiraatiijiyadihii dejinta ee ay diyaariyeen IGAD iyo Dowladda Federalka ee Ku-meelgaarka ah. Waxa aan ayidney tiro mabaa’dii ah oo hagaya taageerada caalamiga ah ee la siinayo arrimaha degannaanshaha ee gudaha ee Soomaaliya (Lifaaqa C). Waxaan xusney in la sameeyey Sanduuqa Maaliyad Degganaansho oo cusub kaas oo qaar badan oo innaga mid ahi ay wax ku biirin doonaan (Denmark, Netherlands, Norway, United Arab Emirates, United Kingdom).
Isku duwid Caalami ah
SHIRKA LONDON EE SOOMAALIYA: GEBOGEBADA KULANKA ARRIMAHA BANI’AADAMNIMADA
Wada-hadal arrimaha bani’aadamnimada ku saabsanaa oo ka barbar-socdey Shirka London ee Soomaaliya ayaa ka dhacay aqalka Lancaster House 23kii Febraayo waxaana ka qaybgaley wakiillo ka socdey bulshada caalamka. Kulanka barbar-socdey shirka waxaa looga dan lahaa sidii loo joogteyn lahaa sida ay bulshada caalamku diiradda u saartey dhibaatooyinka hadda jira iyo kuwa dabadheer, iyo dadaallada lagu wanaajiyo waxtarka/taabogalnimada waxqabadka bani’aadamnimada ee mustaqbalka.
Ka-qaybgalayaashu waxaa ay soo dhoweeyeen hindisaha ah in la qabto kulan barbar-socda shirka oo ku saabsan arrimaha bani’aadamnimada, kaas oo isu keeney bulshada caalamka si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka hadda socda iyo kuwa dabadheer ee ka jira Soomaaliya.
Waxa aan soo dhoweyney baaqii 3dii Febraayo ay Qaramada Midoobey soo saartey ee sheegayey in ay dhammaadeen xaaladihii macaluusha ee Soomaaliya. Haseyeeshee, waxaa aan carrabka ku adkeyney sida weyn ee aan uga welwelsannahay in 2.34 milyan oo qof ay weli dhibaatooyin haystaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin 1.35 milyan oo qof oo dad gudaha ku barokacay ah. 295,000 qof oo Soomaali ah oo qaxaya ayaa ka gudbey xuduudaha sanadkii 2011, tiradaas oo wadarta guud ee qaxootiga Soomaalida ah ee jooga gobolka ka dhigeysa ku dhowaad 1 milyan. Waxaa si gaar ah looga welwelsanaa haweenka iyo carruurta ku baylahsan Soomaaliya, iyada oo 325,000 carruur ah ay nafaqo-xumo ba’an hayso iyo rabshadda jinsiga la xiriirta ee sii badaneysa, iyo xadgudubyada xuquuqaha carruurta ee jira. Waxaa aan xusney in xaaladda bani’aadamnimada iyo ilaalinta deegaanku ay weli tahay mid jilicsan, gaar ahaan tan koonfurta dalka.
Waxaa aan mar kale ku celinney in hawlgalka bani’aadamnimadu ay tahay in ay hagaan mabaa’diida hawlaha bani’aadamnimada ee ah bani’aadamnimo, madax-banaani, dhexdhexaadnimo iyo eex-la’aan si loo hubiyo in gargaarka iyo ilaalintu ay gaaraan kuwa u baahan, waqtiga ay u baahan yihiin. Waxa aan soo dhoweyney dadaallada dhammaan kuwa ku hawlan bixinta gargaarka bani’aadamnimada ee la siinayo dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ka mid yihiin maamullada qaran iyo kuwa degaan, Qaramada Midoobey, dowladaha gobolka, dalalka xubnaha ka ah, bulshada rayidka ah (oo ay ka mid yihiin qurba-joogga) iyo ururrada aan dowliga ahayn. Waxaa aan isla qaadanney in ay dhammaan kuwa gargaarka bixiya ay si taabogal ah oo waxtar leh ay hawlahooda isugu duwaan ay tahay mid muhiim u ah daboolidda baahiyaha.
Waxaa aan carrabka ku adkeyney muhiimadda ay leedahay in si joogto ah loo kala saaro ujeeddooyinka bani’aadamnimada iyo ujeeddooyinka siyaasadeed iyo kuwa ammaan iyo in isku qasidda ujeeddooyinkan ay halis gelineyso sidii kaalmada aadka muhiimka u ah loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed, waxaa aan ugu baaqeynaa dhammaan dhinacyada jooga Soomaaliya ay hubiyaan in hawl-wadeennada bani’aadamnimada loo oggolaado in si buuxda, ammaan ah oo aan caqabado lahayn u gaaraan kuwa u baahan, iyo in ay hubiyaan in kuwa u baahan ay bedqab ku soo gaari karaan gargaarka.
Waxa aan isla oggolaaney in loo baahan yahay in maamullada Soomaalida iyo bulshada caalamku ay sii wadaan taageero waqtigii loo baahnaa timaadda oo joogto ah oo gacan looga geysanayo yareynta silica haysta dadka Soomaaliyeed. Iyo sidoo kale in in gargaar degdeg ah loo bixiyo siyaabo wax taraya soo-kabashada iyo horumarka waqtiga dheer, taas oo ay ka mid tahay abuurista xaaladihii ay ku imaan lahaayeen xalal waara oo loo helo barokacayaasha. Waxaan isla oggolaanney in la adkeeyo dadaallada socda, ee ay hoggaamineyso Qaramada Midoobey, si loo xoojiyo isuduwidda hawlaha.
Ka-qaybgalayaasha ayaa sidoo kale si adag ugu heshiiyey in, marka lagu daro wax ka qabashada baahiyaha degdegga ah ee bani’aadamnimada, in loo baahan yahay in bulshada caalamka ay dadaalkeeda isu geyso sidii dadka Soomaaliyeed ay qacan uga siin lahayd in ay dhisaan sidii ay ugu adkeysan lahaayeen dhibaatooyin mustaqbalka soo socda iyada oo bixineysa taageero sanado badan socota oo lagu bixiyo maciishadda iyo adeegyada bulshada ee aasaasiga ah. Waxaan isku af-garanney in loo baahan yahay in Qaramada Midoobey ay hoggaanka u qabato istiraatiijiyad-u-dejinta hawshan, iyada oo ku xisaabtameysa dadaalladii dhowaanahan ay sameeyeen iyo kuwa hadda wadaan dalalka IGAD ee lagu yareynayo dhibaatooyinka xaaladaha abaareed ee degdegga ah.
Waxa aan mar kale sheegney muhiimadda ay leedahay in dhammaan dhinacyada ku lugta leh khilaafka ay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah, ee uu ka mid yahay Sharciga Caalamiga ah ee Bani’aadamnimada, gaar ahaan in kuwa hubeysan ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagamamaarmaanka ah ee looga hortegayo dhaawac iyo dhimasho soo gaarta dadka rayidka ah iyo in ay hubiyaan in hawlgal mileteri aanu caqabad ku noqon gaarsiinta gargaarka bani’aadamnimada. Waxaa aan isku af-garanney baahida loo qabo in la wanaajiyo nidaamyada lagula soconayo loogana soo warbixinayo xadgudubyada la xiriira Sharciga Caalamiga ah ee Bani’aadamnimada ee ka dhaca Soomaaliya.
Waxaa aan muujinney welwelka aan ka qabno dhibaatada haysata qaxootiga ku nool dalalka deriska iyo sida aan uga mahadcelineyno martigelintooda annaga oo mar kale ku celinney in aan taageereyno dalalka martigeliya qaxootiga. Waxaa aan isla oggolaanney in loo baahan yahay in bulshada caalamku ay Dowladaha gobolka kala shaqeeyaan sidii xalal waara loogu heli lahaa qaxootiga Soomaalida ah ee ixtiraama shuruucda caalamiga ah. Waxaa aan soo dhoweyney ballanqaadkii Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobey ku ballanqaaddey in ay cusbooneysiin doonto dadaal ay hoggaanka ugu qabaneyso sidii loogu heshiin lahaa xalal waara oo arrinta loo helo.
Iyada oo English ahna halkan guji oo ka akhriso.
Full text of the Communique from the conference that took place on 23 February.
This post has been viewed 1233 times.	Categories: Daily Somali News